Service Center တွေက ဈေးကြီးသလား? – DigitalTimes
Service Center တွေက ဈေးကြီးသလား?
Android Others Vivo
ဒီနေ့ခေတ် အိုင်တီပစ္စည်း သုံးစွဲသူတွေ ကြားထဲမှာ အငြင်းပွားလေ့ရှိကြတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ Service Center က ဈေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်က ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အာမခံချက် အပြည့်အဝရရှိတယ်ဆိုတဲ့ အားသာချက် တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့်တော့ စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေကြားမှာ ဒီအငြင်းပွားမှုက ပိုပြီးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးမြင့် စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲသူတွေကြားမှာထက်၊ အလယ်အလတ်နဲ့ တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေကြားမှာတော့ တစ်ခုခုဆို Service Center ကိုသွားဖို့ လက်တွန့်နေကြတတ်တာ များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်ဆိုင်မှာ ပြင်တာကအများကြီးကို ဈေးသက်သာတယ်။ အပြင်ဆိုင်တွေက အများကြီးမတောင်းဘူး၊ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလုံး လဲလိုက်စရာမလိုဘူးလို့ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
သုံးစွဲသူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းက ဝယ်ထားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။ warranty မကုန်သေးပေမယ့် user fault ကြောင့်ပျက်တာဆိုတော့ ပစ္စည်းကလဲရတော့မယ်။ Service Center ကတော့ original ပစ္စည်းနဲ့လဲပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ခမပါ ပစ္စည်းဖိုးတင် နှစ်သောင်း၊ သုံးသောင်းကျမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ user လည်း အပြင်ဆိုင်မှာ သွားပြကြည့်တယ်။ အပြင်ဆိုင်ကလည်း ဒီဖုန်းရပျက်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို Service Center ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကွာခြားသွားတာက ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအစားထိုးတဲ့နေရာမှာပါပဲ။ original ပစ္စည်း မသုံးဘူး။ အလားတူ အစိတ်အပိုင်းမျိုး သုံးရင်လည်းရတယ်။ ဈေးသက်သာမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီတော့ user အနေနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းလည်း ပြန်ကောင်းမယ်။ ပြင်ဆင်ခလည်း ဈေးသက်သာမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်တာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိထားသင့်တာက ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟာ တန်ဖိုးနည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ မူလ original အစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Service Center က original အစိတ်အပိုင်း အသစ်ကို အစားထိုးပြီး ပြင်ဆင်ပေးတာပါ။ ပြင်ပဆိုင်ကတော့ original အစိတ်အပိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အသစ်လည်း ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး original အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်တာကို အစားထိုးလိုက်တာကြောင့် ဖုန်းရဲ့ ရေရှည်ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ ပြဿနာရှိလာမယ်ဆိုရင် နစ်နာမှာက user ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Service Center တွေအနေနဲ့ original ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရည်အသွေးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လဲလှယ်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းက original မဟုတ်ခဲ့ရင် သူကနေတစ်ဆင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဟာ အသုံးခံသင့်သလောက် မခံဘဲ စောစောစီးစီး ပျက်စီးသွားနိုင်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်း original မသုံးဘဲ အခြား အပိုပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ကားပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင် ပိုပြီးသိသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတတ်သာလွန်းလို့ သုံးလိုက်ရပြီး အရည်အသွေးပိုင်းမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုမရတာတွေကို မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ လဲလိုက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကောင်းပေမယ့် တခြားမီးခိုးကြွက်လျှောက် ပြဿနာတွေ ဆက်ဖြစ်လာတတ်တာလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စမတ်ဖုန်းလို ပစ္စည်းမျိုးမှာ Service Center သွားပြီး original နဲ့ အစားထိုးတာက အကောင်းဆုံးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ Service Center တွေက ဈေးမကြီးဘူးလားလို့ မေးရင်၊ ဈေးကြီးတယ်လို့ပဲ ပြန်ဖြေပါရစေ။ ဒါပေမယ့် ပြင်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု၊ စိတ်ချရမှုနဲ့ ရေရှည်ကောင်းကျိုး ရှိမှုအတွက် ထည့်ပြီး စဉ်းစားကြဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Vivo ဟာ သူတို့ရဲ့ customer တွေကို လေးစား ဂရုစိုက်သောအားဖြင့် Vivo Smart Phone တိုင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက Vivo Service center တွေ ရှိတဲ့နေရာကို လိပ်စာအတိအကျနဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ပါ ထည့်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Vivo Smart Phone တိုင်းကိုလည်း ၁ နှစ်အာမခံပေးထားပါတယ်။ ထုတ်ကုန်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု တစ်ခုခု ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဝယ်တဲ့နေ့ကနေ ၁၅ ရက်အတွင်း အခမဲ့ အစားထိုးလဲလှယ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် User fault ဆိုရင်တော့ အာမခံကာလအတွင်းဖြစ်ပေမယ့် ပစ္စည်းဖိုးပေးအပ်ရမှာပြီး ပြုပြင်မှုကတော့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိမှာပါ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို original နဲ့ ပြန်လည် အစားထိုး တပ်ဆင်ပေးတဲ့အတွက် အရည်အသွေးပိုင်းကိုလည်း စိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi က Stock Android ပါတဲ့ Mi A1 ကို မိတ်ဆက်
Dell က ဒီနှစ်အတွင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့ Inspiron 15 7000ကို feature ပိုင်းနဲ့ Display ပိုင်းကို ပြင်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချ